Barnaaminka ilaalinta ee CISP
| Ilaalinta |
Arrinta aan diiradda saarno
Dadaalka CISP ee ilaalinta waxaa uu bilowdey dhammaadkii 2008dii, ka dib markii ay Galgaduud noqotey mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee ay yimaadaan Dadka Gudaha Ku Barokacay ee gobollada kale ka imanaya. Daraaseyn laga wada-qaybqaatey, oo 2009kii iyo 2010kii lagu sameeyey 13 degsiimooyinka Dadka Gudaha Ku Barokacay oo ku yaalla hareeraha Guriceel, ayaa muujiyey sida ay xaaladuhu u culus yihiin iyo sida uu u maqan yahay qaab dadkaas ay taageero ku helaan. Habka ay CISP u mareyso waa mid ku dhisan in Dadka Gudaha Ku Barokacay lala mideeyo bulshada marti-gelisey. “Bulshada Guriceel ee dadkan martigelisey waxaa ay weligeed taageero siin jirtey Dadka Gudaha Ku Barokacay ee ku nool hareeraha degaamada magaalooyinka ah. Maalin kasta oo Jimce ah ayaa masaajidka waxaa dadka looga codsadaa in ay qaaraan ururiyaan, oo ay cunto iyo biyo iibiyaan ayna u qaybiyaan Dadka Gudaha Ku Barokacay. Qaar ka mid ah dugsiyada qur’aanka ayaa waxaa dhigta carruurta xerooyinka Dadka Gudaha Ku Barokacay ka yimaada. Mararka qaar haweenka magaalooyinka ayaa iska soo ururiya dhar una qaybiya carruurta Dadka Gudaha Ku barokacay” (Zahra, xubin urur haween oo degaanka ka dhisan). Sidaas oo ay tahay haddana dadaalladaa socda ma ahan kuwo dad ku filan waxaana jirta in bulshada barokacayaasha martigelisey iyada lafteedu ay si ba’an u saameeyeen dhibaatooyinka socda. Sidaa daraaddeed dadaalka CISP waxaa uu ku wajahan yahay in bulshada loo taageero si ku fadhida hababka ilaalinta iyo yareynta halista.
0-4 247 268 515
5-17 309 335 644
18-59 606 656 1,262
60 and > 75 80 155
Total: 1,236 1,339 2,575
Dadka aadka u nugul ee ku nool 9 xerooyinka barokacayaasha ah oo ku yaalla Guriceel oo ay taageerto CISP
Xaqiiqooyin iyo tirooyin:
Bishii Agoosto 2010kii ayaa CISP ay bilowdey mashruuc tijaabo ah oo ku wajahan in:
Bulshada barokacayaasha marigelisey: 40,000 qof oo ku nool magaalada Guriceel;
2,575 qof oo loo aqoonsadey in ay yihiin kuwo aad u nugul, gaar ahaan hooyooyinka aan la qabin, haweenka aan haysan dakhli soo gala iyo qoysaska tirada badan, carruurta aan lala socon, iwm.
Iyada oo si firfircoon ay bulshooyinku uga qaybqaadanayaan, ayaa CISP waxaa ay dhistey xarumo bulsho iyo garoomo ah meelo ay ku nabadgalaan haweenka, dhallinta iyo carruurta. “Waxaa ay noqdeen goobo bulsho, oo lagu kulmo loogana wada sheekeysto arrimaha maalin kasta dadka haysta oo si wadajir ahna xal loogu raadiyo. Laakiin waxaa sidoo kale lagu qabtaa arroosyada” ayaa ay ku warbixisey Xaliima, oo ah Isuduwaha CISP ee Guriceel. CISP ayaa goobta u adeegsata in ay bulshada kaga wacyigeliso arrimaha la xiriira rabshada jinsiga ku dhisan, halisaha socdaalka/tahriibka iyo ilaalinta carruurta.
Xarumaha Bulshada, ayaa Dadka Gudaha Ku Barokacay iyo bulshada martigelisey ay ku heli karaan adeegyada bukaannada loogu gudbiyo xarumaha caafimaadka ee ay taageeraan CISP iyo MSF, waxaana ay ku dhisi karaan nidaamka ammaanka bulshada, waxaana agabka aan cuntada ahayn ku heli kara badi dadka nugul, iwm. Intaa waxaa dheer in ay ka qaybgaleen tababarro ayna ku heleen talooyin iyo waxyaabo kale oo ku saabsan sida loo bilaabo waxqabadyada dakhli abuurista, sida dubista rootiga, tolidda dharka iyo gaari-dameerka oo gaadiid ahaan loo isticmaalo.
Ka dib markii lagu guuleysey mashruucii tijaabada ahaa, CISP waxaa ay ku dhiirratey in ay sii waddo dadaalka taageeridda ah iyo in ay fikradda xarumo hawlo badan lagu qabto ay ka sameyso afar goobood oo kale oo xerooyinka Dadka Gudaha Ku Barokacay ah oo ku yaalla hareeraha Guriceel, iyo sidoo kale xerooyin Dadka Gudaha Ku Barokacay oo ku yaalla hareeraha Caabudwaaq iyo Gaalkacyo. Hadafka laga leeyahay waa in la wanaajiyo hababka is-caawinta iyo daweysashada iyada oo la taageerayo nidaamyada ilaalinta ee bulshadu ay salka u tahay ee badi dadka jilicsan. In ay si toos ah uga qaybqaataan bulshada ku nool degaannada barokacayaasha martigeliyey ee hawsha laga fulinayo ayaa tiir u ahaan doonta istiraatiijiyadda, sidoo kale in barnaamijka la sii wado ayaa tiir u ahaan doona istiraatiijiyadda.
Home Hawsheenna Ilaalinta Barnaamijka Ilaalinta